Wakagumburwa Here? | Martech Zone
Chitatu, December 31, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri muverengi pano kwenguva yakati, unozviziva izvo Ndiri murudo neStumbleUpon. Yangu blog inoenderera ichiwana nhamba yepamusoro yevashanyi kuburikidza neStumbleupon.
Semutemo wakajairwa, vanhu havadi kuti iwe uzvikurudzire-pachako mapeji ako pamasaiti senge StumbleUpon. Ini ndakatumira zvinyorwa zvangu munguva yakapfuura - asi kashoma. Dai ndaifunga kuti kutumira kwaive nekukakavara kana kuti kwaigona kuwana kutarisisa kwakawanda pamhedzisiro yadzo, ini ndinogona kuzvigumburisa pachangu. Zvikasadaro, ini ndinongovimba kuti vamwe vachada peji racho voripa chigunwe kumusoro.
Izvo zvakati, hapana chakaipa nekudzokera uye kupa zvigunwe kumusoro zvemapeji izvo vamwe vatove Kugumburwa Pamusoro mukati mewebsite yako. Kana iwe ukaedza kutsvaga yako domeini kana webhusaiti mukati meStumbleUpon, iwe uchawana yavo yekutsva yakanaka inonzwisa tsitsi uye inogumira kumateki ayo vashandisi vanozadza.
Chikamu chinyorwa: Dai ndaive StumbleUpon, ndaizodaro zvachose shandisa Google Tsvaga Kutsvaga semubhadharo wemari.
Uchishandisa Google, zvakadaro, iwe unogona kuwana nyore kuti ndeapi mapeji epawebhusaiti yako akagumburwa kuti iwe ugone kukanda imwe vhoti mukati! Yangu blog, ini ndinongotsvaga:
saiti: chinogumbus.com martech.zone
Izvi zvinondipa runyorwa rwemapeji angu ayo vamwe vakagumburwa kuitira kuti ndikwanise kuita imwe vhoti. Kuzvishandira? Pamwe - asi ini ndinozendamira munzira kuti zvakanaka nekuti mumwe munhu atoona sekuti positi yakakodzera Kugumburwa.
Kana iwe uri paStumbleUpon, ive shuwa ku ndiwedzere seshamwari.
Ndatenda neichi posvo. Ndakanga ndamboedza kuita izvi zvisati zvaitika asi handina kuwana Google syntax chaiyo kana chimwe chinhu. Uye ndizvozvo; StumbleUpon inofanira kuvandudza yavo yekutsvaga kugona. Ini ndinofunga zvaizovewo zvakanaka kana StumbleUpon ikakutendera kuti utore ako ega mablog kuitira kuti iwe ugone kunyorera kune yekuvandudza chero nguva mumwe munhu akagumburwa imwe yemasaiti ako.
Google haina kuona mapeji ese pane yangu saiti akaendeswa kuSU.
Kufanana newe, ini ndinotenda zvakasimba muSU sezvo ichipa huwandu hwehuwandu hwemotokari ku blog yangu.
Ndira 2, 2009 na3: 13 PM
Ini ndichangosaina account nekuti munhu wese anoti its a great way to drive traffic. Ini ndanga ndichifamba kuburikidza neprofile yangu uye ndiri kunetsekana nekutanga, zvinoita kunge zvishoma zvinovhiringidza. Iwe unokurudzira chero madhairekitori kuti utarise uye uverenge kuti unyatso kutanga uye kudzidza maitiro ekuishandisa?
Mbudzi 3, 2009 na10: 09 PM
Ndatenda, yako google syntax yaibatsira kwazvo. Zvinotaridza senge ndine akati wandei kutumira paSU, kungoona traffic 🙁
Nov 4, 2009 pa4: 00AM
Kuti unyatsotora mukana weStumbleUpon, ita shuwa yekudonhedza imomo uye woishandisa kashoma pasvondo kukora masosi iwe aunogumburwa nawo. Paunenge iwe ukavaka chimiro chakanaka, ndinotenda maitiro ako anozovandudza. Usango gumbura ako masaiti, zvakadaro! Izvo zvinonyanya kufuratirwa.